सावधान ! ओभरडाइटिङले निम्त्याउँछ यस्तो गंभिर समस्या – Chetananews.com
सावधान ! ओभरडाइटिङले निम्त्याउँछ यस्तो गंभिर समस्या
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०९:५१ 446 पटक हेरिएको
जब मीठो खानेकुरा भेट्छौ, जतिसक्दो खान्छौ । कहिले कहिं भोकै पनि बसिन्छ । खानपानको यस्तो उतार-चढावले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । कहिले पाचन यन्त्रमा एकसाथ धेरै खानेकुराको बोझ थपिन्छ भने कहिले आवश्यक पोषण तत्व अपुग हुन्छ ।
किन खाने ?
खाना खानुको खास अर्थ हो, शरीरलाई आवश्यक पोषण प्राप्त गर्नु । बाँच्नु । वा, प्राण धान्नु । तर, हामी शरीरको लागि खाना होइन, स्वादको लागि खाना खान्छौ । भोक मेटाउन खाना खान्छौ । त्यही कारण शरीरलाई कति र कुन खानेकुरा आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी ख्याल गर्दैनौ ।
कति खाने ?
हामीले हेक्का राख्दैनौ कि आफ्नो शरीर अनुसार कति खाना आवश्यक छ भन्ने कुरा । खानेकुरा त्यती नै खानुपर्छ, जति शरीरका लागि आवश्यक छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्म गरिने भोजनबाट हामी प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फलाम, फाइबर लगायतका तत्वहरु ग्रहण गरिरहेका हुन्छौ, जो शरीरलाई आवश्यक हुन्छ । अतः यी सबै तत्व एकैनासको खानाबाट प्राप्त हुँदैन । त्यसको स्रोत भिन्न भिन्नै हुनसक्छ । त्यसैले सन्तुलित खानेकुरा आवश्यक हुन्छ, जसबाट सबै किसिमको पोषण तत्व प्राप्त गर्न सकियोस् ।
एउटा भनाई छ, ‘बिहानको खाना आफुले खानु, दिउँसो खाना साथीसँग बाढेर खानु र रातीको खाना सत्रुलाई दिनु ।’
अर्थात खानाको दैनिक तालिका अनुसार बिहान भरपेट खाने र त्यसपछि क्रमस घटाउँदै जानुपर्छ । यो स्वस्थ्य खानपानको सहि विधी हो । बिहान खाइने खानाले शरीरलाई दिनभरको लागि उर्जा दिन्छ । मध्यन्ह वा राती खाने खानाको मात्रा भने कम हुनुपर्छ । यदि बिहानकै अनुपातमा राती पनि खाना खाइन्छ भने त्यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिदैन ।
खाना विस्तारै चपाएर खानुपर्छ । खाना खाँदा प्रशन्न हुनुपर्छ भनिन्छ । खाना खाने समय तालिका एकैनासको हुनुपर्छ । अर्थात् बिहान, मध्यन्ह, साँझ कुन समयमा खाना खाने हो, त्यसको निश्चित तालिका निर्धारण गर्नुपर्छ ।